Global Voices teny Malagasy · 3 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 03 Janoary 2019
Amerika Latina03 Janoary 2019
Mihevitra ny mpanohana azy fa tsy tokony hiteny ankoatra ny lohahevitra efa neken'ny fianakaviana mialoha ny mpampianatra. Raha ampiharina izany dia lasa mandrara ny lesona fanabeazana ara-pananahana na ny fanehoan-kevitra momba ny fanandevozana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Janoary 2019
Azia Atsimo03 Janoary 2019
Eoropa Afovoany & Atsinanana03 Janoary 2019
Niteraka onjam-panehoana hevitra tao amin'ny tontolon'ny Twitter androany ny matoandahatsoratra nosoratan'i Nicholas Kristof. mpanao gazety ao amin'ny New York Times Ao anatin'io tsanganan-dahatsoratra io no ametrahany fanontaniana raha toa ka antony maha-"hondrankondrafana" ny ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ny finoana Silamo. Nanehoan'ny mpamaky hevitra ny nisafidianana io teny io...
WSISblogs.org: Hevitra tokony hohatsaraina?
Mediam-bahoaka03 Janoary 2019
Araka ny efa fantatry ny maro aminareo, herintaona latsaka sisa dia ho avy ny Fihaonambe Manerantany momba ny Fiarahamonin'ny Vaovao (World Summit on the Information Society) (WSIS) 2005. Karakarain'ny Firenena Mikambana sy ny ITU, hiezaka hamita ny asan'ny fihaonambe WSIS voalohany tamin'ny desambra 2003 ny WSIS.